Tag: tijaabooyin | Martech Zone
Laba sano ka dib markii ay ka bilaabeen istuudiyaha dhiirrigelinta ee 'High Alpha', barnaamijka 'AI' ee suuq geynta Pattern89 wuxuu si dhakhso leh u sii deynayaa qalab cusub oo loogu talagalay xayeysiimaha Facebook, Instagram iyo Google. Nidaamka suuqgeynta ee AI ee 'Pattern89' wuxuu isku daraa awooda barashada mashiinka xogta xayeysiiyaha aan horay loo arag. Waxay cadeysaa oo ay falanqeeysaa qaababka xogta ee hagaajin doona natiijooyinka ololaha. Falanqeyntan xogta joogtada ahi waxay haysaa ogeysiisyada dijitaalka ah ee noocyada ugu casrisan uguna sarreeyaa waxqabadka. Iyada oo la bilaabayo Buttonkooda "Sidan iigu Samee", Qaabka89,
Google Optimize wuxuu ku bilaabay beta koox kooban oo isticmaaleyaal ah. Waan awooday inaan isdiiwaangaliyo oo aan socod ku maro mareegta maantana waxaan dhihi karaa waa - wow. Waxaa jira 3 sababood oo aan u aaminsanahay in tani ay carqalad weyn ku noqon doonto suuqa tijaabada. Xaqiiqdii, haddii aan ahaa madal tijaabo ah, waxaa laga yaabaa inaan hadda ka baxo. Isku xirka isticmaalaha ayaa la jaan qaada kuwa kale
Google Website Optimizer waa kaput, oo lagu beddelay Google Experiment. Tijaabooyinka Mawduuca, waxaad isbarbar dhigi kartaa sida bogagga shabakadaha kala duwan ay u qabtaan iyagoo isticmaalaya muunad nasiib ah oo booqdayaashaada ah, qeex inta boqolkiiba ee booqdayaashaada ku jira tijaabada, dooro ujeeddada aad rabto inaad tijaabiso iyo, ugu dambeyntiina, sidoo kale waad heli doontaa ku cusbooneysiin emayl ku saabsan sida tijaabadaadu u socoto. Waa kuwan muuqaalka muuqaalka ah ee Tijaabooyinka Google: Sida ugu casrisan uguna ballaadhan sida Google Analytics u noqotay,